रु रुको आइपीओ भर्ने आज अन्तिम दिन,अहिलेसम्म कति पर्याे आवेदन ? - DURBAR TIMES
HomeEconomyरु रुको आइपीओ भर्ने आज अन्तिम दिन,अहिलेसम्म कति पर्याे आवेदन ?
रु रुको आइपीओ भर्ने आज अन्तिम दिन,अहिलेसम्म कति पर्याे आवेदन ?
रु रु जलुविद्युत परियोजनाको आइपीओ भर्ने मंगलबार (चैत २४ गते) अन्तिम दिन हो । कम्पनीले चैत २० गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि प्रिमियम भाउमा आइपीओ निष्कासन गरेको हो ।
कम्पनीले प्रतिकित्ता १२० रुपैयाँ दरको कुल ४ लाख ७ हजार ७०६ कित्ता आइपीओ निष्कासन गरेकामा ८ हजार १५४ कित्ता कर्मचारी र २० हजार ३८५ कित्ता म्युचुअल फन्डहरुलाई छुट्याइएको छ । बाँकी ३ लाख ७९ हजार १६७ कित्ताका लागि सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्नेछन् ।
रु रु जलुविद्युतको आइपीओमा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम सबै कित्ताका लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था रहेको छ । यद्दपी, मागभन्दा अत्याधिक धेरै आवेदन परिसकेकाले १० कित्ता सेयर पाउन पनि भाग्यमै भर पर्नुपर्ने भएको छ । यसमा बिक्री प्रबन्धकको काम एनएमबि क्यापिटलले गरेको छ । लगानीकर्ताले सि–आस्वा प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा मेरो सेयरमार्फत सेयर भर्न सक्नेछन् ।
हालसम्म कति पर्याे आवेदन ?
सोमबार साँझ ५ बजेसम्म १ करोड ८६ लाख ५९ हजार ९६० कित्ताका लागि आवेदन परिसकेको छ । १३ लाख १ हजार ३८४ जनाले कुल १ अर्ब ८६ करोड ५९ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बराबरको आवेदन दिएका हुन् । यो सर्वसाधारका लागि बिक्री खुला गरिएको ३ लाख ७९ हजार १६७ कित्तालाई आधार मान्दा ४९.२१ गुणा बढी आवेदन हो ।
Previous articleप्रहरी र तस्कर समूहबीच गोली हानाहान
Next articleकर्णाली कोरिडोरको निर्माण तीव्र